KDE neWayland vanozowirirana zvirinani muna 2021, uye neimwe nzira yemugwagwa | Linux Vakapindwa muropa
KDE neWayland vanozowirirana zvirinani muna 2021, uye imwe nzira yeprojekti
Semushandisi we KDE Pese pandinogona, ini ndinotoshandisa akawanda emaapps avo pane yangu Manjaro xfce-usb, iyo nhau nezve iyo projekiti inondinakidza kunyanya. Yekupedzisira iyo atumira Nate Graham maminetsi mashoma apfuura, uye mairi anotaura nezvezvinhu zvinonakidza kwazvo. Zvimwe zvacho ndezvekunaka, asi zvimwe zvacho zvine hukama nechimwe chinhu chavave kushanda nacho kwemwedzi yakawanda. Kunyanya, iyo graphic server iyo yavanoda kuwana mukurumbira mune ramangwana.
Chinhu chekutanga chakakosha chaanotaura ndechekuti Plasma Wayland zvikamu zvakavandudza zvakanyanya, zvinoreva kuti inoshanda nemazvo uye unotarisira kuti, kutanga kwa2021, vanhu vazhinji vazhinji vanozogona kuishandisa mukufambisa kwavo kwebasa. Wayland yaitova imwe yezvinangwa zve KDE mu2020, asi Graham anovimbisa kuti yese yaive "ruzha", kuti hapana chaive chiri kushanda sezvaifanira uye 2020 raive risiri gore rake. Iye anotarisira kuti ichave iri 2021, kana zvirinani kuti inotanga kuve.
KDE Kickoff ichachinja kuve yakashongedzwa, asi havazi vese vanozoifarira zvakaenzana
Chinhu chinotevera kutaurwa naGraham muchinyorwa chake ndechekuti Kickoff inozotsiviwa, kana zvimwe zvakanyatsogadziriswa. Une mufananidzo mutsva mu Iyi link, uye pachangu handizive kana ndiri kufara neshanduko iyi. Parizvino, iyo yekutanga application iri kuratidza mifananidzo patinenge tichifamba, uye mune iyo nyowani ichave yakanyanya kana zvishoma zvakafanana, asi zvinoita sekunge inoratidza rumwe ruzivo. Yakapedzwa zvakanyanya, uye inotarisirwa kusvika padivi pePlasma 5.21 muna Kukadzi 16.
Mune imwe nzira yemugwagwa, izvi zvinangwa zvinotaurwa zvakare:
Kutsigirwa kweminwe. Izvi zvinogona kutora nguva kuti zvisvike, sezvo ichifanira kuve chakabatanidzwa mu SDDM, iyo yekuvharira sikirini, KAuth nePolkit, asi tinovimba kuti chichava chokwadi muna 2021 umo tangori nemaawa gumi nesere chete.
Breeze theme ichavandudza. Zvakawanda zvichasvika padivi pePlasma 5.21 munaKukadzi uye zvimwe zvese zvichauya muPlasma 5.22 kana kunyangwe 5.23. Kubva pane zvavanotsanangura, izvo zvinoshandiswa zvichave mufananidzo wakawanda kwazvo uye stylized.
Hwindo Konsole achadzokorora iwo mavara patinoshandura saizi yayo.
Kune mushandisi seni, anotevera iyo KDE nhau kubva pasvondo kusvika pasvondo, izvi zvingaite kunge zvidiki, asi ndizvo makuru mapoinzi ane shanduko huru izvo zvinokodzera kutaurwa kwakakosha. Pakati pevhiki, Nate Graham pachake anotitaurira nezve dzimwe shanduko diki dzavanogadzirira desktop yavo nemaapp, sezvavakaita muzuva ravo ne Chiitiko chekududzira chiitiko iyo yatinogona kushandisa kare mune masisitimu senge KDE neon kana Manjaro.
Chero zvazvingaitika, ndicho chinhu chekutanga chirongwa cheKDE chakatiudza muna 2021, icho chinoshandawo kutikorokotedza pagore uye tichaita zvakafanana: Anofara 2021!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KDE neWayland vanozowirirana zvirinani muna 2021, uye imwe nzira yeprojekti
Kuwa kwe Flash uye kukunda kwewebhu zviyero
Kukwira kweFlash. Iyo tekinoroji iyo yakapa kuwirirana kuwebhu